45% Gbanyụọ nke ndebanye aha akpaaka Email
Vero bụ ozi ahia akpaaka email nke gbadoro anya na ime ka ngbanwe onye ọrụ na njigide. Iji ozi ịntanetị ezubere iche ị nwere ike ịmepụta ụba ego ma melite afọ ojuju ndị ahịa.
Martech Zone ndị na-agụ nwere ike inweta Pasent 45 nke ndebanye aha Vero Small plan site na iji njikọ njikọ anyị!
Vero Email Marketing gụnyere
Nkọwa nke onye ahịa ọ bụla - Sochie data gbasara ndị ahịa gị na ebe nchekwa data gị. Jiri data ị nakọtara dị ka aha, ndị ahịa, na afọ ndị ahịa gị iji kewaa nchekwa data gị ma zipụ ozi ịntanetị ezubere iche. N'ime oge Vero na-akpaghị aka na-eme omume nke ndị ahịa ọ bụla na weebụsaịtị gị gụnyere ibe ha gara, ụdị ha nyefere na bọtịnụ ha pịa. Lelee profaịlụ ọ bụla nke ndị ahịa n'oge ọ bụla, gụnyere akụkọ zuru oke nke ozi ịntanetị ị zigara ha na omume ha mgbe ha natara ha.
Akwụkwọ akụkọ di omimi - mepụta ngalaba siri ike, nke ezigbo oge dabere na ihe ndị ahịa mere (Ihe Nlereanya: pagenye ọnụahịa a na-eleta ugboro 4 n'oge gara aga) ma ọ bụ ihe onwunwe ha (Ihe atụ: na Europe). Zipu akwukwo ozi nye ndi ahia gi niile ma obu jiri ala mee ihe iji zipu ozi ziri ezi nye ndi ahia. (Ihe nlere: edebara aha maka nnwale efu ma akwụghị ụgwọ).
Nnwale A / B - Nnwale na-enye gị ohere ịchọpụta usoro isiokwu, site na adreesị, nnomi ahụ ma ọ bụ ndebiri ndị ahịa gị metụtara nke kachasị mma - na-enye gị ohere karịa maka ịnweta ego. A / B na-anwale ngwa ngwa akụrụngwa gị na akwụkwọ akụkọ dị mfe na Vero. Naanị tinye mgbanwe na mkpọsa ọ bụla ị mepụtara ma kọwaa pasent nkewa na Vero ga-akọ na ndị ọzọ.
Tags: ule uleprofaịlụ ndị ahịaakwụkwọ akụkọ na-agbanwe agbanweakpaaka emailna-emegharị ahụnkelekwasịrịkpaliteozi-triggered emaileziokwu
Fluid: Kere, Nwalee na Ekekọrịta Mobile Prototypes gị